memory stick problem လေးရှင်းပေးပါဦးခင်ဗျာ — MYSTERY ZILLION
memory stick problem လေးရှင်းပေးပါဦးခင်ဗျာ
September 2008 edited April 2009 in Other
Memory Stick ကို ထိုးလိုက်ရင် My computer မှာလာတော့ပြတယ်
open လိုက်ရင် Please insertadisk intoadrive ဆိုပြီးပေါ်နေတယ်ခင်ဗျ
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ထင်တာလို့ကြိုပြောထားတယ်နော်။ အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြောသလောက်ပဲသိရ တော့ဒီလောက်ပဲခန့်မှန်းလို့ရတယ်။ အဲ့ဒီပြသနာမျိုးကတော့ Drive Letter သွားတူနေရင် ဖြစ်နို်င်ပါတယ်။ တခြား USB Device တွေသုံးထားတာမျိုးရှိရင် အဲ့ဒါတွေဖြုတ်ပြီးစမ်းကြည့်ပါလား။ ပြီးရင် My Computer ကိုဖွင့်လိုက်ရင် တွေ့တဲ့ Memory Stick Drive ကိုမှတ်ထားပြီး (ဥပမာ - E:, F:..) My Computer ----> Right Click ---> Manage ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Storage က နေပြီး Disk Management ကိုနှိပ်ပြီး ညာဖက်အခြမ်းမှာ ရှိတဲ့ Hard Disk, CD Rom and Memory Stick တွေကိုပြလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီမှာ ခုနက My Computer ထဲမှာ တွေ့တဲ့ Memory Stick ရဲ့ Drive letter နဲ့ အခုတွေ့တဲ့ Drive Letter နဲ့မှန်လား တိုက်ကြည့်ပါ။
နောက်တစ်ခုက အဲ့ဒီ Drive ကို Drive Letter Change ကြည့်ပါလား။ Change ပုံက ဒီလို...
ခုနကပြောတဲ့ အထဲမှာ Memory Stick ကို Right Click လုပ်လိုက်ပြီးရင် Change Drive Letter and Path ကိုနှိပ်ပါ။ လက်ရှိအနေအထားမှာ (E:) ဖြစ်နေရင် (G:) ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါ။ System ကတော့ ရှိပြီးသား Drive Letter ကို ထပ်အောင် ပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်လည်း အကြံပေးကြည့်တာပါ။ အဆင်ပြေရင်ပြန်ပြောဦးနော်။ ပိုဆိုးသွားရင်လဲပြန်ပြောပါ။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။
ပျက်သွားတာဖြစ်ဖို့ များတယ်။ ဒီပြင် စက်တွေမှာ စမ်းကြည့်ပါ။ မရရင်တော့ သေချာပါတယ်....
) ပျက် ) သွား ) ပြီ )
မသိဘူးနော် ဖြစ်နိုင်တာ ပြောတာ။ အခုနောက်ဆုံးပေါ် ဗိုင်းရစ် တွေကလည်း အမိုျးမိုျးဆိုတော့.. ဒါပေမယ့် သေချာပါတယ်..ဟဲဟဲ
AH! Plz help.:((:((:((
My memory stick have some problem.
Detail info about memory stick:
2.I bought it since march 2008.
3.I use it at the both internet cafe' n home/office.
4.I do formatting once.But after format, the device is good to use.
5.I keep it in my bag to safe from water(for example rain,etc.).Therefore It never been contact with water.
Before problem occur(in good condition)
When I connect it to computer, this memory stick blink red light inside the memory stick body.
After problem occur(in bad condition)
When I connect it to computer, this memory stick doesn't blink red light inside the memory stick body.
And I see "removable drive(F:/) icon" in the "mycomputer dialogue box" is disappear n appear again and again I think may be3times it happens during 1 second.very fast.
I can't open my stick.
Plz help me:((
Don't anybody help?
Haymar Min wrote: »
I think your flash drive is gone for good. It happened to me once last year, but fortunately all the files in the stick has been backed up into my PC. Next time, make sure you use "Safely Remove Hardware" function before you take out the stick from computer - it will make the stick last longer.
ကျွန်တော ့မန်မိုရီ စတစ် ကျတော့ကွန်ပျုတာ က သိတယ်..ဖိုင်တွေ ဖိုဒါ တွေ မြင်ရတယ်...
ကော်ပီ လုပ်လို ့မရဘူး.. နောက်ထပ် ဆက် ထ ဲ့လို ့လဲ ရ တော ့ဘူး....
ဘယ်လို လုပ်ရ ပါ ့မလဲ...
အဲဒါကတော့ စက်ထဲမှာ virus ရှိမယ်ထင်တယ်။ stick ကိုတော့ ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ virus မရှိတဲ့စက်မှာ virus စစ်ပြီး format ချလိုက်ပါ။ ပြန်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်။
usb အပေါက်ပျက်နေတာလားမသိ အပေါက်ပြောင်းထိုးကြည့်ပါလား မီးလည်းမလင်းဘူး ပေါ်တချက်ပျောက်တစ်ချက်လဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့
Time about2months ago
i gotaproblem after formatting then i can't put any data to it and it's original software disappeared and i don't have that software.So please advice me how should i do??